डुंगामार्फत माछा- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
आश्विन २७, २०७६ हरि गौतम
रुकुम पश्चिम — बाँफिकोट गाउँपालिका ३ र ५ मा फैलिएको स्यार्पुतालमा हरेक बिहान डुंगा खियाइन्छ । त्यसरी बिहानै डुंगा खियाउनुको उद्देश्य घुम्न आउने पर्यटकलाई घुमाउन भने होइन । तालमा विगत ७ वर्षदेखि डुंगा चढेर माछा मार्ने गरिएको छ ।
स्यार्पुतालमा माछापालन थालेदेखि स्थानीयले माछा मार्न बिहानै डुंगा खियाउने गरेका हुन् । २०६९ देखि स्यार्पुताल कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले माछा पाल्न थालेको हो । सहकारीका अनुसार २०७० मा २ लाख ५० हजार रुपैयाँका माछा बिक्री भएका थिए । सहकारीले बर्सेनि आम्दानी बढिरहेको जनाएको छ । सहकारीका अनुसार गत आवमा ८ लाख ३३ हजार रुपैयाँका माछा बिक्री भएका थिए । चालु आवमा ४ लाख ६२ हजार रुपैयाँमा एक स्थानीयले माछा मार्ने जिम्मा लिएका छन् ।
वर्षा सकिएसँगै जालमा बढी माछा पर्ने गरेका छन् । तालमा सिल्भर कार्प, विगहेड, कमन कार्प र ग्रास प्रजातिका माछा पालिएको सहकारीले जनाएको छ । सिल्भर कार्प र बिगहेड प्रतिकिलो २ सय ७० मा बिक्री हुन्छ भने कमन कार्प र ग्रास प्रतिकिलो ३ सय रुपैयाँमा बेच्ने गरिएको छ ।
माछा खरिदका लागि कतिपय ग्राहक तालकै छेउमा पुग्छन् । सदरमुकाम मुसीकोट र आसपासका व्यापारिक केन्द्रमा पनि माछा बिक्रीका लागि पठाइने गरिएको सहकारीका अध्यक्ष प्रकाश केसीले बताए । उनका अनुसार तालबाट स्थानीयले लामो समयदेखि आम्दानी लिइरहेका छन् । उनले प्राकृतिक तालको अवलोकनका साथै लगानी नगरेरै स्थानीयको आम्दानी बढाउन माछा पालिएको जनाए । तालमा पालिएका माछाको आम्दानी पनि सहकारीले बोनसमार्फत स्थानीयलाई वितरण गर्दै आइरहेको छ ।
स्यार्पुका माछा स्वादिला हुने भएकाले सदरमुकाम र अन्य व्यापारिक केन्द्रमा माग बढिरहेको छ । युनाइटेड मिसन टु रुकुम क्लस्टरले स्यार्पुतालमा माछा उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गरी माछापालनका लागि सहयोग गरेको थियो । स्यार्पुमा उन्नत जातका माछा पाल्न थालिएपछि रैथाने माछा भने देखिन छाडेका छन् ।
‘माछापालनले आम्दानी बढाएको छ नै, तालको सौन्दर्य पनि बढेको छ,’ उनले भने, ‘पर्यटकलाई आफैं माछा मार्ने सुविधासमेत दिएका छौं ।’ अध्यक्ष केसीले ताल आसपासका क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास हुन थालेपछि पर्यटकको संख्या पनि बढ्दै गएको जानकारी दिए ।
प्रकाशित : आश्विन २७, २०७६ ११:४०
चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपाल र भारत दुवै देशको २/२ दिन भ्रमण गरे  । जतिखेर उनी भारतको चैन्नई विमानस्थलबाट काठमाडौँ प्रस्थान गर्दै थिए, त्यतिखेर भारतीय टेलिभिजनहरूमा चीन–भारत बीचको व्यापार असन्तुलनको विषयमा निकै चर्का–चर्का बहस भइरहेको थियो  ।
भारतीय विज्ञहरूले चीनबाट भारतमा वार्षिक ८० खर्बको सामान आयात भइरहेको तर भारतबाट चीनमा केवल २० खर्बको निकासी भइरहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै यो व्यापारिक घाटा कम गर्न पहल गर्नुपर्ने अन्यथा भारतको बजार चीनका लागि बन्द गर्नुपर्ने बताइरहेका थिए । चीन र भारतबीच व्यापार असन्तुलन ४ भागमा १ भागमात्र छ, तर नेपाल–चीन र नेपाल–भारत बीचको व्यापार घाटा दसौँ दोब्बर बढी छ । र पनि हामीले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाइरहेका छैनौं । गतवर्ष भारतबाट ११ खर्ब र चीनबाट २ खर्ब बराबरको सामान नेपाल आयात गरियो । दुवै देशमा गरी १ खर्ब बराबरको सामानमात्र नेपालले निर्यात गर्न सक्यो । जबसम्म नेपालले बाह्य लगानी आकर्षित गरी उत्पादन बढाउँदै निकासी गर्न सक्दैन, तबसम्म यो व्यापार असन्तुलन कम हुन सक्दैन । यसका लागि दीर्घकालीन नीति र रणनीति बनाउनुपर्छ । जुन नेपालले गर्न सकिरहेको छैन ।
चीनले भारत लगायत दक्षिण एसियाका १ सय ५७ करोड जनताको विशाल संख्यालाई ध्यान दिई ‘बीआरआई’ जस्ता रणनीति लागू गरिरहेको छ । तर नेपालले आजसम्म त्यस नीतिबाट कसरी फाइदा लिने भनी ठोस योजना तर्जुमा गर्न सकिरहेको छैन । नेपालको लागि भारत र चीनको विशाल बजार उपलब्ध छ, तथापि पूर्वाधार र उत्पादन नहुँदा ती बजारबाट लाभ लिन सकिरहेका छैनौँ । भारतले नेपाली निकासीमा बेलाबेला तगारो लाउने गरेको छ, तर चीनले नेपालको ८ हजार वस्तुमा शून्य भन्सार सुविधासहित निकासीको अवसर दिएको छ । तर पनि हामीले त्यसबाट फाइदा लिन सकिरहेका छैनौँ । किन ? त्यसको कारण खोज्नसके मात्र हामीले छिमेकी मुलुकबाट फाइदा लिन सक्छौँ । अन्यथा हात लाग्यो शून्य । चीनसँग नेपालको मित्रताको इतिहास निकै लामो छ । भृकुटी, अरनिकोदेखि केपी शर्मा ओलीसम्म आइपुग्दा इतिहासका पाना निकै भरिएका छन् । तथापि त्यस अनुरुपको ठोस सहयोग आदान–प्रदान भएको भने खासै देखिएको छैन । विश्वको आर्थिक महाशक्ति बन्ने मार्गमा रहेको चीनले चाहेमा नेपालजस्तो गरिब र अल्पविकसित छिमेकी देशको मुहार नै बदलिदिन सक्छ । चीनले आफ्नो सीमा क्षेत्रमा बनाएको सडक वा अन्य पूर्वाधारले त्यसबेलासम्म नेपाललाई कुनै फाइदा गर्दैन, जुन बेलासम्म उस्तै प्रकृतिको पूर्वाधार नेपालतर्फ बन्दैनन् । भारतीय लगानीमा खुलेका डाबर नेपाल होस् वा युनिलिभर नै किन नहोस्, सबै निकै नाफामा चलेका छन् । तर चीनतर्फबाट खोलिएका सबै उद्योगहरू आज बन्द भएका छन् । किन ? कारण खोजौँ, यसपालि । प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सीलाई भनुन्, ‘छिमेकी विपन्न भएसम्म तिमीमात्र सम्पन्न हुनुको अर्थ हुँदैन । यसर्थ नेपाललाई भित्री मनदेखि नै सहयोग गर । अनि मात्र नेपालीहरू तिमीहरूसँग खुसी हुन सक्छन् । तिमीलाई वास्तविक मित्र मान्न सक्छन् ।’ परिणाम दिनसके मात्र मित्रताको अर्थ रहन्छ । भारततर्फको अधिक निर्भरता कम गर्न पनि चीनतर्फका सडक, व्यापार र निकासी, पैठारी बढ्नुपर्छ ।
– गोपाल देवकोटा, जोरपाटी, काठमाडौँ
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा नेपालको राजकीय भ्रमणमा आएका चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपालको पूर्वाधार विकास सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सहयोग घोषणा गरे । यो स्वागतयोग्य छ । चीन हाम्रो प्राचीन मित्रराष्ट्र हुनुका साथै असल छिमेकी पनि हो । चिनियाँ सहयोगको रूपमा हामीले अरनिको राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग, निजामती कर्मचारी अस्पतालजस्ता ठूला आयोजना प्राप्त गरेका छौँ र हाम्रो मागलाई स्वीकारेर अझै चीनले सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको छ । विगतमा चीनले पर्यावरणमैत्री विद्युतीय बस र त्यसको सञ्चालनका लागि तारसहितको पोल जडान गरेका अवशेषहरू अझै मीनभवन, नयाँबानेश्वरमा देख्न सकिन्छ । मित्रराष्ट्र चीनबाट प्राप्त फाइदामूलक आयोजनालाई समेत हामीले राम्रोसँग सञ्चालन गर्न नसकेको विगतलाई हामीले सम्झिन सकेनौँ भने सहयोगी हातहरूले हामीलाई शङ्का गर्नेछन् । हाम्रो क्षमता कमजोर भएको सन्देश जानेछ ।
प्रकाशित : आश्विन २७, २०७६ ११:३५